यौन र पैसामा कुरा नमिल्दा टाउको काटेर झोलामा, शरीर सुटकेशमा ! - muktikhabar
मुक्तिखबर	काठमाण्डाैं	साउन २७, २०७७
काठमाडौं । टाउको र खुट्टा काटिएको अवस्थामा सुटकेशमा शव भेटिएको गोंगबु गणेशस्थान हत्या प्रकरण यौनसँग जोडिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । दुई दिनअघि दाङका कृष्णबहादुर बोहराको विभत्स हत्या गरेर सुटकेशमा शव भेटिएको थियो । सुटकेशमा शरीर र टाउको तथा खुट्टा केही पर झोलामा फेला परेपछि पहिचान खुलाउन दुई दिन लागेको थियो ।
हिजो दिउँसो फेसबुकमा मृत्तकको अनुहारसहित फोटो सार्वजनिक भएपछि पहिचान खुलेको थियो । हत्याको मुख्य कारण महिलासँगको यौन विवाद रहेको कारक ठानिएको छ ।
हत्या गर्ने अभियुक्तबाट ‘यौन’का विषयमा विवाद हुँदा अण्डकोषमा हम्मरले हानेर हत्या गरेको बयान आएको छ । यौनभन्दा अगाडी यो विवाद पैसाको लेनदेनसँग पनि जोडिएको अनुमान छ । तर हत्याको मुख्य कारण यौन मात्रै हो वा पैसा ? भन्ने खुलिसकेको छैन् ।
शवको प्रकृति हेर्दा घटना पैसाको लेनदेनसँगै यौनसँग पनि जोडिएको देखिन्छ । तर यसको अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी छ ।
दाङका कृष्णबहादुर बोहराको उमेर परिपक्व देखिन्छ । यो अवस्थामा यौनकै विवाद हत्यासम्म पुगेको घटनाले एकपटक सबैलाई चकित तुल्याएको छ । यद्यपी यसबारेमा प्रहरीको अनुसन्धान जारी छ । पक्राउ परेकी महिलाले बताएअनुसार पटक पटक ‘सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट’ गरेकै कारण कृष्णबहादुरको हत्या गरिएको हो ।
शनिबार बेलुकी नै गोंगबुस्थित ती महिलाको कोठामा पुगेका उनको राती हत्या भएको थियो । सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टपछि किला ठोक्ने हम्मरले अण्डकोषमा हानेर हत्या गरिएको महिलाको बयान छ । सुटकेशमा भेटिएको उनको शवमा पनि अण्डकोषमा निलडाम देखिन्छ ।
सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट नै हत्याको कारण भनिएपनि त्यो कस्तो ह्यारेसमेन्ट थियो भन्ने खुलेको छैन् । पटक पटक जबर्जस्ती यौन सम्पर्क गर्न खोज्दा, सम्पर्क गर्न नमान्दा वा सन्तुष्ट हुन नसकेकोबारे खुल्न सकेको छैन् । उनीहरुबीच यौन सम्बन्ध कहिलेदेखि शुरु भयो ? त्यो पनि अन्योल छ । एक छोरीसमेत साथमा रहेकी भनिएकी ती महिलाका श्रीमान कहाँ छन् ? भन्ने पनि खुल्न बाँकी छ ।
साथै महिलाले अण्डकोषमा हानेर हत्या हुदाँसम्म कृष्णबहादुर चिच्याउनुपर्ने हो । घटनाबारे अरुलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो । तर घटनाबारे केही पनि थाहा नभएको घरभेटी तथा छिमेकीले बताएका छन् । अण्डकोषमा हानेर मारेपछि टाउको र खुट्टा काटेर झोलामा र कृष्णबहादुरको शरीर सुटकेशमा हालेर सडकछेउमा लिएर फालेको महिलाको बयान छ ।
सिंगो शरीर सुटकेशमा नअटेपछि टाउको र खुट्टा काटेर हाल्नु परेको उनको भनाई छ । टाउको र खुट्टा अर्को झोलामा हालेर फालिएको थियो । जुन सुटकेशभन्दा तीन सय पर प्रहरीको तालिमप्राप्त कुकुरले भेट्टाएको थियो ।
यसरी विभत्स हत्या गरेर शव व्यवस्थापन गर्नुको कारणबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
आमाको अपराधमा अवोध छोरी साक्षी !
अभियुक्त महिलाले कृष्णबहादुरको विभत्स हत्या गर्दा उनकी छोरी साथमै रहेको प्रहरीले लिएको बयानमा देखिन्छ । हम्मरले कृष्णबहादुरको अण्डकोषमा हानेर आमाले हत्या गरेपछि खुकुरीले घाँटी र खुट्टा काट्दा छोरीले सहयोग गरेको महिलाको बयान छ ।
आमा छोरीबाहेक घटनामा अरु कसैको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको ती महिलाले बताएकी छिन् । तर शवको प्रकृति हेर्दा हत्या योजनाबद्ध रुपले मार हान्न सक्ने व्यक्तिले गरेको प्रहरीको अनुमान छ । यसबारे पनि अनुसन्धान भइरहेकाले एकिन हुन बाँकी छ ।
प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान सकेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने बताएको छ ।nepalbahas
२७ साउन २०७७, मंगलवार १०:२७ बजे प्रकाशित